ပထမဦးဆုံးသရုပ်ဆောင်အခန်းကဏ္ဍ — Steemit
ငါလယ်သမားတစ်ဦး၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အတန်းအစားထဲတွင်အလှဆုံးမိန်းကလေးလယ်သမားရဲ့ဇနီး၏အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်ဘုန်းကြီးခံစားရတယ်။
ကျနော်တို့ကစား တစ်ခုလုံးအပတ်ကနေခဲ့ရသည်။ နှလုံးအားဖြင့်လိုင်းများသင်ယူခြင်းငွီးငှေ့ဖှယျဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်အထပ်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်းများ အဖြစ်ပထမဦးဆုံးအစမ်းလေ့ကျင့်နေတဲ့ဘေးဥပဒ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ တဝက်တဒါဇင်ခြစ်ခြစ်ပြီးနောက်ကျနော်တို့အမှုအရာညာဘက်အရစီမံခန့်ခွဲ။ ဒါဟာအားလုံးအရမ်းပင်ပန်းတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အချို့သောသရက်သီးဆွတ်ဖို့သရက်သီးသစ်ပင်တက်မှငါ့ကိုမလိုအပ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ကစာသင်ခန်းထဲမှာတစ်သရက်သီးသစ်ပင်ကိုမထားနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလှေကားနှင့်အတူမျက်နှာကျက်ကနေ string ကိုကသရက်သီးဆွဲထားသဖြင့်လုပ်။ သူများသည်ညာသင်ပုန်းများ၏ရှေ့မှောက်၌ထားရှိသည့်ကျားကန်တည်း။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကစား၏နေ့သို့ရောက်ကြ၏။ ငါသည်ငါ၏လုပ်ဘော်ဆောင်ဘက်သရုပ်ဆောင်တွေအတူစာသင်ခန်းများ၏ရှေ့မှောက်၌, အစား, စင်ပေါ်မှာ သွား. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့စွာသွား၏။ ကျနော်တို့ဇာတ်စင်-ကြောက်စိတ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြစ်ခြစ်ကျေးဇူးတင်ဆယ်သားသမီးများ၏အကျွမ်းတဝင်ပရိသတ်ကိုတယ်ဘယ်တော့မှမ။ အကြောင်းတစ်ဝက်အတန်း, ကြွင်းသောအရာပရိသတ်ကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
esteem first role life
Congratulations @taylae! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @taylae! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @taylae! You receivedapersonal award!